E-visa any Rosia - Rosia mpitari-dalana - Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.
Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.
E-visa any Rosia - Rosia mpitari-dalana
Manomboka amin'ny aogositra, izay hatao ny taona, teratany Fanjakana vahiny dia mety ho toy ny fanomezana ny e-visa Rosia ny alalan ny sisin-tany miampita hevitra, any amin'ny faritry ny maimaim-poana ny seranan-tsambo ao VladivostokNy olom-pirenena ao amin'ireto firenena ireto dia afaka hahazo ny e-visa any Rosia. Ny e-visa maimaim-poana. Fanasana, ny hotely famandrihana ny fandraisana ho mpikambana na antontan-taratasy hafa izay manamafy ny tanjona ny diany ho any amin'ny Federasiona rosiana, dia tsy maintsy ho e-ny fahazoan-dàlana. Ny fe-potoana ho an'ny namoaka ny e-ny fahazoan-dàlana dia tsy misy intsony noho kalandrie andro manomboka ny daty fanekena ny tanteraka ny fampiharana. Ny e-visa Rosia dia manan-kery ho an'ny fidirana ao sy ny fivoahana avy ao amin'ny Federasiona rosiana ihany ny alalan ny fanarahana ny Fanjakana miampita sisintany hevitra ny rosiana Federasiona hita ao amin'ny faritry ny maimaim-poana ny seranan-tsambo ao Vladivostok. maritime-maso"Vladivostok","Zarubino","Petropavlovsk-Kamchatsky","Korsakov","Posiet". lalana toeram-pisavana"Poltavka","Turiy Rog". E-visa Rosia no iray-teny visa sy navoaka ho kalandrie andro manomboka amin'ny vaninandro ny famoahana izany. Navela hijanona ao amin'ny Federasiona rosiana tamin'ny e-ny fahazoan-dàlana dia niakatra ho any andro manomboka amin'ny daty ny teny, ao anatin'ny fe-potoana mampanan-kery.
E-visa kery sy na navela hijanona eo ambany izany dia tsy azo omena.
E-visa Rosia dia mety ho 'ireto sokajy manaraka ireto ihany: ny raharaham-barotra ny olon-tsotra visa (tanjon'ny diany dia raharaham-barotra), olon-tsotra mpizaha tany visa (tanjon'ny diany dia ny fizahan-tany), sy ny olon-tsotra amin'ny maha-olona"visa"(tanjon'ny diany dia fanatanjahan-tena, ara-kolontsaina, ara-tsiansa sy teknolojia sy ny fifandraisana). Raha ny tanjon ny diany ho any amin'ny Federasiona rosiana ny tsy mifanaraka na ny etsy ambony, dia tokony mampihatra ny nentim-paharazana (tsy elektronika) hanome fahazoan-dàlana ho amin'ny iraka diplaomatika na masoivoho birao ao amin'ny Federasiona rosiana. Teratany vahiny izay tonga any amin'ny Federasiona rosiana amin'ny e-"visa"manana ny zo sy ny fahalalahana hetsika ao anatin'ny faritry ny panorenana fikambanana ao amin'ny Federasiona rosiana, izay izy ireo no niditra tao, afa-tsy ny faritra, ny fikambanana sy ny foto-drafitrasa, ny hiditra izay manokana ny fahazoan-dalana dia takiana araka ny lalàna federaly ao amin'ny Federasiona rosiana. Vahiny ny olom-pirenena dia tokony hiala amin'ny faritry ny Federasiona rosiana ihany amin'ny toera-pisavana ny panorenana fikambanana ao amin'ny Federasiona rosiana, izay izy ireo no niditra. Afaka mameno ny fampiharana endrika ho e-visa any Rosia eo amin'ny TRANONKALA tsy teo aloha noho ny andro, ary tsy taty aoriana noho ny andro alohan'ny natao daty fidirana ao amin'ny Federasiona rosiana. Ny pasipaoro dia tsy maintsy ho manan-kery, fara fahakeliny, volana manomboka amin'ny daty tsy ampiharina ho e-ny fahazoan-dàlana. Ny pasipaoro dia tsy maintsy manana toerana malalaka ho an'ny niampita sisin-tany hajia. Teratany vahiny izay tonga any amin'ny Federasiona rosiana amin'ny e-ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy manana ny fiantohana ara-pahasalamana manan-kery ao anatin'ny Federasiona rosiana ny faritany mandritra ny vanim-potoana rehetra ny hijanona.
Raha toa ianao ka efa manan-kery rosiana visa, ianao dia tsy maintsy ampiharina ny e-haka fahazoan-dalana hitsidika maimaim-poana ny seranan-tsambo ao Vladivostok.
Azonao atao ny mitsidika azy amin'ny nentim-paharazana"visa"ao anatin'ny teny hoe raha tsy misy ny famerana nanome ny e-ny fahazoan-dàlana. Nentim-paharazana visa tsy azo havaozina amin'ny alalan'ny fahazoana ny e-ny fahazoan-dàlana. Raha toa ianao ka tsy nandray ny fampahafantarana ny e-visa anie na e-visa fandavana ao anatin'ny efatra andro, dia afaka mangataka visa toy ny isan-ny fitsipika fomba amin'ny iraka diplaomatika na masoivoho birao ao amin'ny Federasiona rosiana. Ny SAINA! Fampahafantarana ny e-visa anie no tsy manome antoka ny fidirana ao amin'ny Federasiona rosiana. Afaka ny ho voasakana tsy hiditra ao amin'ny sisintany niampita fotoana tokony ny toe-draharaha tondroina ao amin'ny Lalàna Federaly No. FZ"ny Paika ny Fivoahana avy ao amin'ny Federasiona rosiana sy ny Fidirana ho any amin'ny rosiana Federasiona"ny aogositra hitsangana. Tokoa drafitra mba hitsidika Moskoa ary St.
Petersburg tanteraka vahoaka andro.
Izahay avy any Thailandy satria fantatro VISA, dia tsy mitaky. Ny fanontaniana hoe: mila Ve aho mba hanao fanampiny zavatra na tsia? Raha ny mpikambana rehetra ao amin ny vondrona dia Thailand olom-pirenena, dia tsy mila na inona na inona fanampiny antontan-taratasy afa-tsy ny pasipaoro. Dia manoro hevitra anao ny travel fiantohana sy ny fiverenana tapakila. Miarahaba, fantatro ny firenena, no tsy ao anaty lisitra, nefa dia tsy azo atao ny mahazo ny e-fahazoan-dàlana amin'ny U. pasipaoro? Te-handany ny iray volana ao St. Misaotra anao noho ny fanampiana sy ny tsy andriko ny valin. Miarahaba, mieritreritra aho hamangy namana iray any Moscou, any Rosia.
Fa eto izany dia milaza fa Evisa miasa fotsiny ny teny bilona Vladivostok.
Fa ny tena lavitra.
Afaka aho avo roa heny hanamarina izany dia azo atao ny mangataka visa ao Moskoa.
Hi! Tsy azoko antoka aho, dia nahazo ny hevitra. Voalohany indrindra, ho azo antoka ianao, dia mila visa any Rosia. Ny sasany amin'ireo firenena' ny mponina no mahazo miditra ao rosia fa tsy visa. Raha mikasa mba hitsidika ny namana izy izy no afaka manao fanasana ho anao. Ary mikasika ny fahazoan-dàlana amin'ny alalan'ny Vladivostok, raha tsy diso aho, dia manan-kery afa-tsy ao Vladivostok, ny faritra ary tsy manome anao ny tsara mba handao ny faritra io.
Tsy Ekena Ny Raharaham-Barotra - Ny Mpampanoa Lalàna Rosiana An-Tserasera Fakan-Kevitra
Ris Konsèy Legal
© 2021 Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.